Igumbi lezingane - iSearch
Ingane engakazalwa, njengomatasa ngaphakathi komndeni omusha kakade umatasa. Ngenkinga yesisu akulona kuphela ukulindela okukhula, kodwa futhi nesifiso sokuthi konke kuphelele isakhamuzi esincane emhlabeni. Yiqiniso, lokhu kufaka phakathi ingaphakathi le-nursery.
Obaba abaningi-ukuba-be abakulungele ngokuphelele lesi simo: lapho umama eqala ngokuzumayo ukwakha isidleke sakhe. Futhi lokho akuyona inganekwane! Kuze ngisho kufakazwe ngokwesayensi ukuthi mayelana ne-5. Inyanga Yokukhulelwa isebenzisa isimo esivame ukubizwa ngokuthi "isidleke sekwakha". Njengasemhlabeni wezilwane, umama olindele manje wenza yonke imizamo yokwenza ikhaya likhululekile ngangokunokwenzeka ekufikeni kwenzalo.
Lokho kuvame ukuqala ukulimala. Ngombhokisi womculo omnandi, mhlawumbe, lapho ungakwazi khona ukudlula. Futhi ngaphambi kokuba wazi, hhayi kuphela ukutadisha okuye kwanikeza indlela yokuthola i-nursery entsha, isivele ibonakale emasendeni amahle kakhulu e-pastel shades!
Manje umbuzo wedivayisi efanelekile. Ngoba igumbi lomntwana akufanele likhululeke kuphela, kodwa ngokuyinhloko lihlangabezane nezidingo eziwusizo. Ikakhulukazi igumbi lokushintsha kufanele lihlelwe ukuze konke kufinyeleleke kalula, ngaphandle kokushiya isikhundla sakho futhi uthathe isandla esiphephile somntwana. Indawo eqinile yokushintsha izingubo kufanele ifinyeleleke njengeshelufu elinama-diapers kanye ne-cream cream. Ngisho ne-pauler ye-diaper ebonakalayo akufanele ibe kude.
Ukusetha igumbi eliphelele, ukuthenga okuningi kuyadingeka. Ifenisha ethile ihlotshaniswa nezidingo zomntwana. Itafula elishintshayo kanye nobheyi zijwayelekile. Abanye abantu abancancisayo nabo bakuthola kuyinto elula ukuthola isihlalo esiqhakazile noma isihlalo sobuhlalo egumbini ukwenza ubisi lwebele ebusuku njengento ekhululekile ngangokunokwenzeka. Ifenisha eminingi isingathengwa ngokubona kwangaphambili. Iningi lefenisha yezingane namuhla laklanyelwe ukukhula kusukela komntwana kuze kube seminyaka yobudala. Ngokuvamile ithebula elishintshayo lingenza (okuzungeze umthamo wabo wokushintsha) lihle njengesibopho sokuhlanza siqhubeke sisebenzisa. Isibhamu singanwetshwa ngobude noma ngokususa izinhlangothi zombhede zisasebenza njengombhede omncane. Kusukela ohlangothini oluthile-itafula, elingathintwa embhedeni wabazali, kukhona ngisho namamodeli namuhla angasetshenziswa kabusha ngezindlela eziningi. Ngaphandle kokusetshenziswa kwayo njengobhentshi bamantombazane enhle, ingasetshenziswa njengesihlalo esiphakeme noma ngisho nedeski ngokushintsha nokufaka izinto ezithile. Ngakho-ke kunconywa kakhulu ukuqhathanisa ifenisha yezingane ekusebenzeni kwazo ngaphambi kokuthenga.
Kodwa futhi ukukhethwa komklamo kufanele kunakekelwe. Ngoba ikakhulukazi uma unquma infenisha ye-nursery ukuze uthole ifenisha ekhulayo, kufanele uqaphele umklamo ongenamkhawulo: ifenisha elula ingahlanganiswa kahle, izinkuni eziqinile zihlala zihlala isikhathi eside kodwa zibiza kakhulu kunezivalo. Imihlobiso emibala noma ama-inlays amahle angase abukeke enhle ekamelweni lamantombazane, kodwa cishe ngeke afane nomntwana oneminyaka emine ubudala. Uma ufuna ukunikeza ingane yakho noma ikamelo labantwana ukuthintana komuntu siqu, kufanele usebenze ngezesekeli zasodongeni njengezithombe, izinhlamvu zamapulangwe, izintambo ze-pennant noma izingwegwe zokugqoka, ezingashintshwa ngaphandle komzamo omkhulu.
Ngokulindeleke, kubuye kuphakanyiswe ukuqhathanisa futhi uma uhlela i-nursery. Uzothola amathiphu amaningi awusizo kumhlahlandlela wethu.